Askar ka tirsan Ciidanka Dowladda oo la la’yahay, kadib doon la degtay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Askar ka tirsan Ciidanka Dowladda oo la la’yahay, kadib doon la degtay
Wararka laga helayo Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in askar ka tirsan Ciidamada Dowladda iyo hubkii ay wateen la la’yahay, kadib markii ay la degtay doon ay wateen.
Askartaan oo ka tagtay Magalada Muqdisho kuna wajahneyd Magalada Marka ayaa waxaa la socday Taliyaha ururka Ciidanka 14 Oktoobar,waxaana ay kula rogmatay meel dhanka bari kaga beegan ee Xeebta Magaalada Marka.
Saraakiil Ciidan ayaa waxaa ay sheegeen in Askartaas ay doonayeen inay socdaal dhinaca Badda ah ku gaaraan Magalada Marka,hayeeshee doonta ay la rogmatay,isla markaana la soo badbaadiyey taliyaha Ciidamada oo lagu Magacaabo Xidigle Cismaan Muuse iyo 12 askari halka la la’yahay 5 askari oo kale.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in dhacdadaan oo xalay dhacday iyo ilaa Maanta uu socdo dadaalo lagu baadi goobayo askarta la la’yahay iyo hubkii ay wateen,waxaana askarta maqan qaarkood Magacyadooda lagu sheegay Cabdi Muxudiin iyo mid magaciisa lagu koobay Fiyuus.
Magaalada Marka ee Gobolka Sh/ Hoose ayaa waxaa mudooyinkii u dambeeysay ay go’doon ugu jirtaa Ururka Al-Shabaab,waxaana jirin gaadiid Magaaladaasi galaya taas oo keentay in askarta Ciidamada Dowladda ay doon ku tagaan Magaalada Marka.
Previous articleNabaddoon Caawa lagu dilay Kismaayo
Next articleMaxkamadda Sare oo ku dhawaaqday qaadista dacwadii Himilo Qaran